Brand.net: Nkenke Geographic na Ngosiputa Ngosiputa Data | Martech Zone
Yesnyaahụ ka mụ na ezigbo enyi m na-eri nri ehihie Troy Bruinsma, onye na-ere ahịa na azụmaahịa zuru oke. Afọ ole na ole gara aga, anyị rụrụ ọrụ na mkpọsa ozi maka Troy ozugbo ọ rụrụ ọrụ na ụlọ ọrụ USB. N'iji nhicha data, data ndị ahịa ya, data ndenye aha ha, data igwe mmadụ na TON nke ọrụ… anyị nwere ike ịkọwa ndị ahịa ha ugbu a ma chọpụta, site n'ezinaụlọ, ndị ezinụlọ nwere ike ịdenye aha nchịkọta USB ma ọ bụ ọwa. Ọ bụ atụmatụ dị ịtụnanya!
Ngwa ngwa ngwa ma ugbu a Troy na-arụ ọrụ Valassis, ma mee ka m mata ihe ha jiri Brand.net rụọ ọrụ. Ahịa.net nwere azịza ahia dijitalụ nke gunyere usoro ihe omuma nke 2,000 + nke nwere ikike na syndicated isi mmalite - agbakọtara n'ime otu usoro ntanetị mgbasa ozi.
na Ahịa.net, ndị mgbasa ozi nwere ikike iru ndị ha na-ege ntị lekwasịrị anya n'ọtụtụ n'ogologo ogo, ngosipụta dị elu, vidiyo na gburugburu ebe obibi. Brand.net na-akarị ebumnuche mkpọsa ahụ kachasị mkpa maka ndị mgbasa ozi ika, na-enye ihe ịga nke ọma site na itinye aka n'ịntanetị, ịmara na ịzụrụ ihe n'ịntanetị.
Usoro ahụ dị ọcha nke na ọ na-agbadata na Mpaghara Mgbasa Ozi Mgbasa… mpaghara mpaghara adreesị IP nke ga-enye ndị mgbasa ozi ohere igosipụta mgbasa ozi na mpaghara mpaghara micro-ezubere iche. Dị ka Troy kọwara, nke a nwere ike inye ndị na-ere ahịa akpaaka iji gosipụta ndị ahịa ha ma gosipụta mgbasa ozi na saịtị dị mkpa na netwọọdụ mgbasa ozi ha kpọmkwem nye ndị nọ n ’ebe dị anya.
Chei… were ya! Emepụtara netwọk mgbasa ozi iji chọpụta, lekwasị anya ma jikọọ ndị mgbasa ozi na atụmanya ha kacha mma.
Tags: netwọk mgbasamgbasa ozi ezubere icheatika.netngosipụta mgbasa oziọdịdị alageographygeotargetingvalassis